Bogga ugu weyn Dib u eegisyada Caymiska Xayawaanka Figo 2021: ma sharci baa mise waa khiyaamo?
Figo waa qorshe caymis xayawaan ah oo la gaaryeelay oo si gaar ah loogu talagalay waalidiinta xayawaanka ee kunka sano. Milkiilayaasha xayawaanku waxay ka dooran karaan saddex qorshe oo dhammaystiran ka dibna waxay ku dari karaan kor u qaadis sida fayoobaanta, caymiska kharashka baaritaanka xoolaha, iyo xirmada daryeelka dheeraadka ah.
Macaamiisha Figo waxay galaangal gaar ah u leeyihiin abka Figo Pet Cloud, kaas oo ay ku jiraan adeegyada sida dhaqtarka xoolaha ee la heli karo 24/7 iyo ka baaraandegidda sheegashada mobilada oo degdeg ah.
Dib u eegista caymiska Figo Pet waxay mari doontaa qorshayaasha kala duwan ee jira, faa'iidooyinka iyo dib u dhacyada caymiska iibsashada, sida loo bilaabo, iyo in ka badan.
Waa maxay Caymiska Xayawaanka Figo sideese u shaqeeyaa?
Caymiska xayawaanka ee Figo wuxuu ka ilaaliyaa bisadaha iyo eyda shilalka iyo jirrooyinka, caawinta bixinta kharashyada booqashooyinka degdegga ah, isbitaal dhigga, daaweynta, iyo baarista caafimaadka xoolaha.
Caymiskan xayawaanku wuxuu la mid yahay caymiska caafimaadka ee aad naftaada u soo iibsatid taas oo ah inaad la kulanto wax laga jari karo sannadlaha ah ka hor intaanay caymiska bilaabmin, siyaasaddu waxay qeexaysaa waxa la daboolay (iyo waxa aan ahayn), oo aad bixiso khidmad bille ah. Caymiska xayawaanka Figo, dhinaca kale, waa mid gaar ah in halkii aad ka bixin lahayd qayb-bixinta wakhtiga adeegga, aad bixiso biilka dhakhtarka xoolaha marka hore ka dibna xereyso cabasho.
Shuruudaha hore u jiray ma daboolaan siyaasadaha caymiska xayawaanka intooda badan, oo ay ku jiraan Figo's haddii xayawaankaagu uu muujiyo calaamadaha wakhtiga aad hesho siyaasad. Haddii xayawaankaagu aanu soo bandhigin wax calaamado ah 12 bilood ee la soo dhaafay, Figo wuxuu samayn doonaa ka dhaafid cudurada la daweyn karo.
Waxa kale oo jira wakhtiyo sugitaan oo shuruudo gaar ah ka hor inta aanu caymiskaagu bilaaban daboolay qorshahaaga.
Si ka duwan qaar ka mid ah Shirkadaha kale ee Caymiska Xayawaanka ugu Fiican ee 2021, Figo ma dabooli doonto xaaladaha gaarka ah ee taranka.
Si taxadar leh u akhri siyaasadaha muunada ah si aad u fahanto waxa caymiska xayawaanku dabooli doono iyo waxa aanu dabooli doonin, sida iyo meesha aad ka isticmaali karto siyaasadda, iyo sida dacwadaha iyo habka lacag-celinta u shaqeeyo, sida aad u samayn lahayd nooc kasta oo caymis ah.
Caymiska xayawaanka ee Figo wuxuu kaa caawin karaa kharashka caymisyada daba-dheeraada iyo kuwa la iska dhaxlo, daaweynta kansarka, ogaanshaha, qalliinnada, booqashooyinka degdegga ah, daawooyinka, sawir-qaadista, qalabyada, iyo lafaha, iyo waxyaabo kale.
Akhri ALSO: Dib u eegisyada Caymiska Maroodiga 2021: Ma sharci baa mise waa khiyaamo?
Waa maxay Faa'iidooyinka Caymiska Figo Pet?
Ma jiraan wax xannibaado shabakadeed ah: Waxaad isticmaali kartaa Figo si aad u aragto dhakhtar kasta oo ruqsad haysta oo jooga Maraykanka, Kanada, ama Puerto Rico. Dhaqamada guud ee caafimaadka xoolaha, khabiiro, iyo qolalka xaaladaha degdegga ah ee xayawaanka ayaa dhamaantood hoos yimaada qaybtan.
Haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah, waxaad heli doontaa 24-saac oo ah dhaqtarka xoolaha nool ee Figo's Pet Cloud app. Adeeggan waxa lagu bixiyaa lacag la'aan iyadoo leh dhammaan siyaasadaha.
Ikhtiyaarada adeegga macaamiisha ee weyn: Waxaa jira siyaabo aan dhammaad lahayn oo lagula xiriiro adeegga macaamiisha Figo. Waxaad nagula soo xiriiri kartaa taleefan, iimayl, qoraal, sheekeysi, ama Twitter.
Ma jirto da'da ugu badan ee diiwaangelinta: Waxaad qori kartaa xayawaankaaga da' kasta. Xayiraadaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay khuseeyaan xayawaanka waayeelka ah, sida faa'iidooyinka dhimashada xaddidan ama xaqiijinta baaritaanka fayoobaanta hadda, laakiin tani waa heer.
30-maalmood dammaanad-celin lacag-celin ah: Haddii aad tijaabiso Figo oo aad ogaato in aanay adiga kugu ahayn, shirkadu waxay kuu soo celin doontaa lacagtaada (marka laga reebo kharashaadka maamulka) 30 maalmood gudahooda haddii aadan xarayn cabasho.
Waa maxay cilladaha Caymiska Xayawaanka Figo?
Iyadoo aan loo baahnayn baaritaanka caafimaadka xoolaha si loogu bilaabo caymiska Figo, waxaa laga yaabaa in lagula taliyo. Haddii mulkiilayaasha xayawaanku aysan soo bandhigi karin caddaynta hubinta 12 bilood ee la soo dhaafay, shirkadu waxay isticmaali kartaa imtixaanka ugu horreeya ee xiga si loo go'aamiyo xaalado hore u jiray. Tani waxay noqon kartaa dhibaato haddii booqashadaada ugu horreysa ee dhakhtarka xoolaha ay tahay dhibaato cusub oo hadhow la diido.
Keliya waxaa ku jira eeyaha iyo bisadaha: Qoysaska leh xawayaanka rabaayada ah ee dheeraadka ah, sida shimbiraha iyo hamsters, ma dabooli doono Figo.
Khidmadaha imtixaanku kuma jiraan qorshaha saldhigga Figo, kaas oo had iyo jeer la qaado inta lagu jiro booqashooyinka shilalka iyo cudurrada. Dhowr dollar oo dheeraad ah bishii, waxaad ku heli kartaa caymiskan.
Waa maxay Qorshayaasha Caymiska Figo ee La Heli karaa?
Qorshaha Figo ayaa dhawaan la hagaajiyay. Hadda waxa ay soo bandhigtay saddex qorshe oo si buuxda loo habayn karo oo leh saddex qorshe oo suurtagal ah iyo saddex awood-kordhin ah, markii ay hore u haysatay doorashooyin xaddidan.
Milkiilayaasha xayawaanka ayaa sidoo kale dooran kara kharash-celinta iyo heerarka laga jari karo marka lagu daro fursadahan.
Shilalka iyo cudurrada waa la daboolay, iyadoo faa'iidooyinka fayoobi ay heli karaan ikhtiyaar ahaan. Rakaabka ikhtiyaarka ah, ee aan lagu darin heerka caadiga ah ee caymiska, waxaa ka mid ah kharashka imtixaanada ee booqashooyinka shilalka ama jirrooyinka, fayoobida, iyo kharashka qabanqaabada kama dambaysta ah. Xayawaanka rabaayada ah badidood, caymiskan dheeriga ah wuxuu ku kacayaa dhowr doollar bishiiba.
Khidmadaha imtixaanka waxaa lagu daboolay siyaasadda ikhtiyaariga ah, taasoo ku siinaysa caymis dhammaystiran.
Marka laga reebo kharashka imtixaanka, raacaha fayoqabka, iyo daryeele dheeraad ah, waxaad dooran kartaa heerarka caymiska ee hoos yimaada siyaasadaha caymiska xayawaanka ee Figo. Xayawaanka intooda badan, lacagta sannadlaha ah ee laga jarayo waxaa lagu dejin karaa meel kasta oo u dhaxaysa $100 iyo $1,500, iyada oo dib u celintu u dhaxayso 70% ilaa 100%. In kasta oo noocyada daryeelka qaarkood laga yaabo inay leeyihiin xad u gaar ah, xadka sannadlaha ahi wuxuu ka bilaabmaa $5,000 oo waxay gaadhaan caymis aan xadidnayn.
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Socodka Eeyga 2022 | Hagaha Buuxa
Halkeen Ka Heli Karaa Caymiska Xayawaanka Figo?
Helitaanka siyaasadda Figo waa mid fudud. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad internetka ka siisaa macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan xayawaankaaga rabaayada ah, sida:
Noocyada iyo noocyada xoolaha, iyo sidoo kale da'dooda
Taas ka dib, waxaa lagu weydiin doonaa inaad doorato siyaasaddaada doorashada. Qodobadan waxaa ka mid ah tirada caymiska aad rabto, xajmiga lagaa jarayo, iyo haddii aad rabto inaad ku darto wax ilaalin dheeraad ah siyaasaddaada iyo haddii kale.
Waa maxay Qiimaha Qorshayaasha kala duwan ee Figo?
Marka la eego qiimaha saafiga ah, khidmadaha Figo ayaa aad uga qaalisan kuwa ay bixiyaan tartamayaasha intooda badan. Xitaa qorshayaasha ugu qaalisan ee alaab-qeybiyaha ayaa si la yaab leh u jaban.
Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in qorshayaashani ay bixiyaan caymis ka yar qaar ka mid ah fursadaha qaaliga ah ee shirkadaha kale. Khidmadaha imtixaanku inta badan waa ilaa $50 booqashadiiba, taas oo aad jeebka ka bixin doonto haddii aanad haysan darawalka kharashka imtixaanka Figo.
Jadwalka hoose wuxuu qeexayaa kala duwanaanshaha qiimaha ee siyaasadaha saldhigga Figo iyo kharashyada dheeraadka ah ee bishii oo ay ku jiraan caymiska kharashka imtixaanka.
Qorshaha saldhiga khidmadaha billaha ah Khidmadaha imtixaanka raaca
Eey: 1 sano $ 22.41 in $ 29.68 $ 5.33
Eey: 3 sano $ 22.36 in $ 29.62 $ 5.32
Eey: 6 sano $ 33.53 in $ 44.41 $ 7.98
Eey: 12 sano $ 88.53 in $ 117.26 $ 21.09
Bisad: 1 sano $ 11.31 in $ 14.98 $ 2.69
Bisad: 3 sano $ 10.47 in $ 13.85 $ 2.49
Bisad: 6 sano $ 15.28 in $ 20.24 $ 3.64
Bisad: 12 sano $ 46.37 in $ 61.41 $ 11.04
Waa maxay Caymiska Xayawaanka Figo Dabool
Iyada oo hab online ah oo buuxda, Figo waxay isu dejisay sidii xoog lagu xisaabtami lahaa xayawaanka rabaayada ah caymiska caafimaadka ganacsiga, siyaasaddooduna sidaas oo kale ayay u ballaadhan yihiin.
Waxay wax walba ka gudbaan min qalliin ilaa shilal, jirro, iyo dhaawacyo, iyo sidoo kale dhibaatooyinka hidda iyo dhalmada. MRIs, raajada, ultrasounds, daaweynta kansarka, arrimaha jilibka, beddelka iyo daaweynta dhamaystiran, prosthetics, iyo dhakhaatiirta xoolaha ayaa sidoo kale daboolay Figo.
Daboolista Caymiska Ikhtiyaarka ah
Ikhtiyaarka "xoojinta" ee fayoqabka, khidmadaha Imtixaanka Xoolaha, iyo Xidhmada Daryeelka Dheeraadka ah ayaa sidoo kale laga heli karaa Figo.
Kordhintan ikhtiyaariga ah waxay dabooshaa kharashaadka daryeelka caadiga ah, sida jir-jimicsiga sannadlaha ah, tallaalada, iyo tallaabooyinka kale ee ka hortagga. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo la heli karo:
Khidmadaha Imtixaanka Xanaanada Xoolaha Aasaaska: $135 caynsanaan fayoobid sanadle ah oo lagu daray: $250 caymiska fayoqabka sanadkii
Kharashyada baaritaanka xoolaha ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan inay ku jiraan siyaasadaha caymiska xayawaanka intooda badan, laakiin bixiye kastaa wuxuu u maamulaa si kala duwan.
Kharashaadka imtixaanka ama la tashiga ee la xidhiidha ogaanshaha xanuunka ama shilka xayawaankaaga u qalma ayaa lagu soo celin karaa qiimo dheeraad ah. Ilaa $250 oo ah cunto kasta oo gaar ah oo uu la taliyo dhaqtarka caafimaadka xoolaha ayaa sidoo kale lagu daray awood-kordhintan.
Xidhmada Daryeelka Dheeraadka ah:
Ku-darkan ikhtiyaariga ah waxaa ka mid ah walxaha soo socda:
Horumarin iyo abaal marin
Xatooyo ama khasaare marin habaabin ah (xadka sannadlaha ah ee $150)
Mas'uuliyadda waxyeelada hantida qolo saddexaad ($10,000 xadka sanadkii)
Ixtiraamka ugu dambeeya ($250 oo lagu daboolayo kharashyada gubashada/xabaalta)
Maxaan daboolin Caymiska Xayawaanka Figo?
Waxaa jira waxyaabo yar oo Figo uusan daboolin, sida shirkad kasta oo ceymiska xayawaanka:
Xanuunada hore u jiray
Dayactirka si joogto ah
Hababka loo sameeyo tijaabooyinka
Dhexdhexaadinta ama isdhaafsiga
Sidee buu u shaqeeyaa adeegga macaamiisha Figo?
Inta badan dib u eegista Caymiska Figo Pet waa mid aad u fiican, iyada oo dad badan oo siyaasadeeyayaashu ay ka warbixiyeen in sheegashooyinkooda lagu xalliyay saacad gudaheed ama xitaa iyagoo wali ku jira xafiiska dhakhtarka xoolaha.
Ururka waxaa lagu heli karaa qoraal, tweet-ka, iimaylka, ama telefoon, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu habboon dadka sida joogtada ah u socda. Figo waxa kale oo uu leeyahay Evie, kaaliyaha AI oo ka jawaabi kara su'aalaha intooda badan, marka lagu daro wakiilada la heli karo.
Figo waxaa lagu heli karaa telefoon. Isniinta ilaa Jimcaha, 8:00 subaxnimo ilaa 7:00 galabnimo wakhtiga caadiga ah ee dhexe; Sabti, 8:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo wakhtiga caadiga ah ee dhexe; iyo Axadda, 11:00 subaxnimo ilaa 3:00 galabnimo wakhtiga heerka dhexe (taageerada qoraalka oo keliya). Kala xidhiidh shirkadda taleefanka 844.738.3446, ku qor 844.262.8133, ama iimayl ku soo dir support@figopetinsurance.com.
FAQs On Figo Pet Caymiska
Figo ma ka jiraa qorshe fayoobi?
Qorshe fayoobaan ah oo keligiis ah oo daboolaya booqashooyinka ka hortagga, tallaalada, fiitamiinnada, iyo nadiifinta ilkaha lagama heli karo caymiska xayawaanka ee Figo. Si kastaba ha ahaatee, waxay siisaa ikhtiyaar fayoobi qorshayaasheeda joogtada ah ee daboolaya tallaalada iyo shaqada caadiga ah ee dhiiga, iyo sidoo kale ikhtiyaarka baadhista dhakhtarka xoolaha kaas oo daboolaya kaliya kharashka imtixaanka ee la xidhiidha xanuunada iyo dhaawacyada daboolan.
Sideen ula xiriiri karaa adeegga macaamiisha Figo?
Waxaad la xiriiri kartaa taageerada macaamiisha Figo adiga oo isticmaalaya shaqada wada sheekaysiga khadka tooska ah ee shirkadda, dir email, qoraal, ama wac shirkadda. Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, ama Sabtida, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, wakhtiga caadiga ah ee dhexe. Adeegga macaamiisha waxa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, 8:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo CST, haddii aad qabto su'aal sheegasho.
Sideen u burin karaa Qorshaha Caymiska Xayawaanka Figo?
Si aad u tirtirto qorshahaaga caymiska Figo Pet, waxaad u baahan tahay inaad boosta u dirto ama wac adeegga macaamiisha si aad u joojiso qorshaha caymiska xayawaanka Figo wakhti kasta. Haddii aad dooratid inaad ku bilawdo habka wicitaanka taleefanka, waa inaad ku bixisa burinta iimaylka.
Ma jiraa xad inta aad ku bixin karto Figo?
Caymiska xayawaanka ee Figo, waxaad dejin kartaa xadka lacag bixinta, kaas oo shirkadu u tixraacayso faa'iidadaada sanadlaha ah. Waxaa jira saddex ikhtiyaar: $5,000, $10,000, ama qaddar aan xadidnayn.
Ma jiraa Figo laga jari karo?
Haa, waa inaad bixisaa lacag laga jari karo ka hor inta uusan Figo kuu soo celinin xanuunada ama dhaawacyada daboolan. Waxaad ka dooran kartaa liiska beddelka ee Figo. Marka aad la kulanto lacagta lagaa jarayo, Figo waxay kuu soo celin doontaa ilaa 100% lacagta lagaa jarayo, ilaa faa'iidada sanadlaha ah, taas oo aad ka dooran karto $5,000, $10,000, ama qaddar aan xadidnayn.
Figo Caymiska Xayawaanka
Dib -u -eegista Minergate 2022: Ma tahay Adeeg Sharci ah ama Fadeexad Macdanta Daruuraha
Ma waxaad raadineysaa shirkad caymis nololeed oo leh qorshaha caymiska ugu fiican? Hadday sidaas tahay, waxaad tahay…
Dad badan ayaa ku dhacay khiyaamo iyo shirkado caymis oo sharci darro ah qaarkoodna xitaa way ka noqdeen…
8+ Caymiska Caafimaadka ugu Fiican ee Sonkorowga sanadka 2022
In ka badan 30 milyan oo qof oo ku nool Mareykanka ayaa qaba cudurka macaanka, sida lagu sheegay tirakoob. Nasiib darro, warbixinadu waxay muujinayaan in…
Shirkadda Caymiska Nolosha ee Colonial Penn waa shirkad caymis nololeed oo Mareykan ah oo fadhigeedu yahay Philadelphia, Pennsylvania. Waxay ku takhasusaan…
Bixinta caymiska nolosha ee TruStage ayaa diyaar u ah xubnaha ururka deymaha, shirkadduna waxay ku xidhan tahay in ka badan 3,500…